Zafimahaleo Rasolofondraosolo : 0,33% monja ve? -
AccueilSongandinaZafimahaleo Rasolofondraosolo : 0,33% monja ve?
Zafimahaleo Rasolofondraosolo : 0,33% monja ve?
04/01/2019 admintriatra Songandina 0
Ny isan-jato azon’ny kandidà Roland Ratsiraka nandritra ny fihodinana voalohany no nanombohantsika ny adihevitra manodidina ny fifidianana omaly, ka nilazana fa tena nisy tokoa ny hosoka sy hala-bato. Sarotra ho an’ny mpanara-baovao politika tokoa mantsy ny hino fa tsy nisy afa-tsy 0,43% no azon’ity mpanorina ny MTS ity.
Mitovy amin’izany koa ny mikasika ny kandidà Zafimahaleo Rasolondraosolo na Dama, izay tsy nahita afa-tsy 0,33% nandritra ny fihodinana voalohany. Mba nanaraka sy nahita ny fampielezan-kevitra nataon’ity kandidà ity ihany ny mpanara-baovao, ary azo ambara tsy misy fisalasalana fa tena maro be ireo resy lahatra taminy isaka ny Faritany, na Faritra nandalovany.
Mampametra-panontaniana avokoa izany rehetra izany, ary mampitomboana tanteraka ny ahiahy ny amin’ny fisian’ny hosoka sy hala-bato nandritra iny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny. Raha io tarehimarika sy isan-jato azon’ny kandidà Roland Ratsiraka io mantsy no marina dia tokony handeha misotro ronono amin’izay ity filohan’ny antoko MTS ity. Efa tsotsori-mamba isarahana eo aminy sy ny tontolo politika tokoa mantsy io 0,43% io, izay tena sarotra inoana tanteraka mihitsy.
Izay no ilazana fa tonga ny fotoana hampitsaharana tanteraka ity hala-bato sy hosoka amin’ny fifidianana ity, izay iaraha-mahalala fa fototry ny krizy nifandimby teto amin’ny firenena, ary vato misakana amin’ny fampandrosoana rahateo koa, satria tsy tena ny safidim-bahoaka marina no mivoaka avy amin’ny fifidianana eto amintsika nandritra izay taona maro nifandimby izay.